Kyerɛ Wo Mma Ahosodi | Mmoa a Wɔde Ma Abusua No
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Myanmar Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Ɛkame ayɛ sɛ wo ba a wadi mfe nsia ntumi nhyɛ ne ho so wɔ biribiara mu. Sɛ ɔhu biribi a, ɔpɛ sɛ ne nsa ka no seesei ara! Ne bo fu a, na ɔresɛe nneɛma. Wodwene ho ara a wonte ase. Ebia wobisa wo ho sɛ, ‘Ɛyɛ mmofrabere mu yareɛ? Ɛyɛ biribi a ɔnyini a ɔbɛgyae, anaa ɛsɛ sɛ mede me nan si fam kyerɛ no ahosodi?’
Nnɛɛmmafoɔ nni ahosodi. Ɔbenfo David Walsh kyerɛw sɛ: “Ɛnnɛ, woyɛ panin oo, abofra oo, daa nea wote ara ne sɛ yɛ nea wo ho bɛtɔ wo. Animdefo ne apoobɔfo a wɔnnim hwee nyinaa bɛka akyerɛ wo sɛ mma obiara ntiatia wo fahodi so.” *
Ɛsɛ sɛ wokyerɛ wo ba ahosodi fi ne mmofraase pɛɛ. Bere bi na animdefo bi reyɛ nhwehwɛmu, na wɔmaa mmofra a wɔadi mfe nnan tɔfe. Wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ nea wanni ne deɛ ntɛm no bɛnya bi aka ho. Ebinom dii wɔn deɛ ntɛm ara, na ebinom nyaa aboterɛ twɛnee. Akyiri yi, bere a mmofra no wiee ntoaso sukuu no, wɔhuu sɛ wɔn a wɔtumi twɛnee no adwenem abue na wɔnim adeɛ sen wɔn a aka no.
Woankyerɛ wɔn ahosodi a, ɛde nsunsuanso bɔne ba. Nwomanimfo kyerɛ sɛ nea mmofra hu anaa wɔsua biara nya wɔn adwene so tumi. Ɔbenfo Dan Kindlon kyerɛwee sɛ: “Sɛ yɛyɛ abahyɛbɔne na yɛammoa mmofra amma wɔanhu sɛnea wɔbɛtwɛn anaa sɛnea wɔbɛhyɛ wɔn ho so a, ɛnneɛ ɛbɛdu baabi no na wɔanyini agya wɔn adwene.” *
Yɛ nhwɛso pa. Wotumi hyɛ wo ho so? Sɛ woreka kar na wodu baabi a kar abɔ apee so a, ɛyɛ a wo bo fu anaa woyi fa ho? Worekɔtɔ adeɛ a, wopere wo ho kɔdi afoforo anim? Wo ne nkurɔfo rebɔ nkɔmmɔ nso ɛ? Ɛyɛ a woma wɔkasa anaa wotwa wɔn ano? Kindlon kyerɛw sɛ: “Mmofra yɛ asuasua, enti wopɛ sɛ wokyerɛ wɔn ahosodi a, yɛ ma wɔnsua.”—Bible mu asɛm: Romafoɔ 12:9.
Ma wo ba nhu nea ɛbɛfi mu aba. Hwɛ mfe a wo ba no adi na boa no ma ɔnhu sɛ ɔhyɛ ne ho so a, ɔbɛnya so mfaso, na wantumi anhyɛ ne ho so a, ɔbɛtwa so aba. Fa no sɛ obi ayɛ wo ba biribi ma ne bo afu. Wobɛtumi aboa no ma wabisa ne ho sɛ: ‘Meyɛ bi tua ka a, m’ani bɛgye anaa ɛbɛha me?’ Dɛn na wohwɛ a ɔbɛtumi ayɛ wɔ ho na ɔhaw no to atwa? Ebia ɔbɛtumi akan baako, mmienu, mmiɛnsa akɔsi du; ɔbɛwie no na ne bo adwo kakra. Ma no nhu sɛ ɔgyaa ma no ka a, ɛbɛboa no paa.—Bible mu asɛm: Galatifoɔ 6:7.
Hyɛ wo ba no nkuran. Sɛ biribi si na wo ba tumi hyɛ ne ho so a, kamfo no. Ma ɔnhu sɛ ɛtɔ mmere bi a ɛbɛyɛ den sɛ ɔbɛdi ne ho so, nanso sɛ ɔtumi yɛ saa a, ɛkyerɛ sɛ ɔnim nyansa! Bible ka sɛ: “Onipa a ɔntumi nhyɛ ne ho soɔ te sɛ kuro a wɔbubu kɔ mu a ɛnni fasuo.” (Mmebusɛm 25:28) Nanso “deɛ ne bo kyɛre fuo no yɛ sene dɔmmarima.”—Mmebusɛm 16:32.
Monsua sɛnea mobɛyɛ no. Mobɛtumi ayɛ biribi te sɛ drama; ebia obi bɛka asɛm bi anaa ɔbɛyɛ biribi. Ɔwie a na woabisa wo ba no sɛ, “Ɛyɛ wo a anka wobɛyɛ dɛn?” anaa wobɛtumi abisa no sɛ nea ɛkɔɔ so no “yɛ anaa ɛnyɛ.” Momfa akwan horow so nni agorɔ no. Wobɛtumi de abaduaba ayɛ biribi, anaa wobɛtumi adrɔdrɔ nneɛma anaa biribi foforo biara a mmofra no ani gye ho a wɔbɛtumi asua biribi afi mu. Adwene a ɛwɔ akyi ara ne sɛ wobɛboa mmofra no ma wɔahu sɛ ahosodi yɛ sen sɛ wɔbɛdi wɔn koko so asɛm.—Bible mu asɛm: Mmebusɛm 29:11.
Nya ntoboase. Bible se “agyimisɛm kyekyere abɔfra akoma ho.” (Mmebusɛm 22:15) Enti nhwɛ kwan sɛ wo ba bɛsua ahosodi prɛko pɛ. Nwoma bi a wɔato din Teach Your Children Well ka sɛ: “Wei yɛ biribi a ɛgye bere; ɛtɔ da a na agye agu, nanso ɛdidi mu didi mu saa na ɔresua ahosodi.” Kae sɛ ntoboase wie nkonimdi. Nwoma no toa so sɛ: “Sɛ wo ba tumi hyɛ ne ho so wɔ ne mmofrabere mu a, ɛnneɛ bere a wadi mfe dumienu no obiara ntumi mfa nnubɔne nnaadaa no, na bere a wadi mfe dunan no, ɔrenni n’akɔnnɔ akyi nkɔbu bra bɔne.”
^ nky. 6 Ɛfi nhoma a wɔato din No: Why Kids—of All Ages—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It mu.
^ nky. 8 Ɛfi nwoma a wɔato din Too Much of a Good Thing—Raising Children of Character in an Indulgent Age mu.
“Mommma nyaatwom mmma mo dɔ mu.”—Romafoɔ 12:9.
“Deɛ onipa guo no, ɛno ara na ɔbɛtwa.”—Galatifoɔ 6:7.
“Ɔkwasea yi n’abufuo nyinaa adi, na onyansafoɔ dwodwo ne deɛ kɔsi aseɛ.”—Mmebusɛm 29:11.
WO BA YƐ ADE PA A BƆ N’ABA SO
Mmofra ntɔtɔfewa mpo bɛtumi asua ahosodi. Nwoma bi a wɔato din Generation Me ka sɛ: “Sɛ wo ne wo ba kumaa kɔ sotɔɔ mu na ɔsu sɛ tɔ tɔfe ma no na wotɔ a, na worekyerɛ no sɛ sɛ ɔrepɛ biribi na ɔsu a, ɔbɛnya. Enti bere foforo sɛ ɔhia biribi a, ɔbɛsu ateateam, efisɛ ɔnim sɛ ɛno ara na ɔde bɛnya wo. Ne papa mu ne sɛ wobɛbɔ n’aba so bere a watumi ahyɛ ne ho so. Awofo bi wɔ hɔ a, sɛ wɔhu sɛ wɔn ba resu a, na wɔn ho yera wɔn, enti akɔdaa no yɛ hwẽ na wɔdi so; nea ɔpɛ biara wɔbɛyɛ ama no. Ebinom nso susu sɛ, sɛ abofra pɛ biribi na wɔde kame no a, na worebɔ no atirimɔden. Nanso kae sɛ, woma abofra no fa wo so a, na wode nneɛma pii na ɛrekame no. Sɛ wo ba pɛ biribi na ɔto ne bo ase bisa a, bɔ n’aba so; ɛbɛboa ma wasua nidie ne ahosodi.”
Adɛn nti na ahosodi ho hia, na yɛbɛyɛ dɛn anya bi?